Japan နိုင်ငံ MEXT (Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology) မှ ပေးအပ်သော အောက်ပါ Scholarship Program များ
Japan နိုင်ငံ MEXT (Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology) မှ ပေးအပ်သော အောက်ပါ Scholarship Program များအတွက် စိတ်ပါဝင်စားသူများ လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
April 29, 2019 (Monday) မှ May 24,2019 (Friday) အထိ ရုံးချိန်အတွင်းလာရောက်လျှောက်ထား နိုင်ပါသည်။
မေ၂၄ ရက်နေ့ နောက်ပိုင်းတွင် MAJA ၏ Facebook Page တွင်ကြော်ငြာပေးထားမည်ဖြစ်ပါသည်။
အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို https://www.mm.emb-japan.go.jp/…/J-Gov%20Scholar%202020.html ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
(2) Age: Applicants, in principle, must have been born on or after April 2, 1985.
(2) Age: Applicants, in principle, must be born on or after April 2, 1995.
① Applicants who have completed 12 years of schooling in countries other than Japan. (Applicants who will meet the above qualifications by March 2020 are eligible. However, applicants wishing to enroll from the autumn term through direct placement must be expected to complete 12 years of schooling by August 2020.)
② Applicants who have completed their studies ataschool equivalent toaJapanese upper secondary school in countries other than Japan. (Applicants who will meet the above qualifications by March 2020 are eligible.)
(2) Age: Applicants, in principle, must be born between on or after April 2, 1995.
(3) Academic Background: Applicants, in principle, must have graduated from an upper secondary school (viz. have completed 11 years of school education starting from elementary school). Applicants who will meet the above qualifications by March 2020 are eligible.)
(3) Academic Background: Applicants must either have completed 12 years of regular school education or have graduated fromaschool equivalent to an upper secondary school in Japan. (Applicants who will meet the above qualifications by March 2020 are eligible.)
အထက်အကြောင်းအရာပါ အချက်အလက်များနှင့် ကိုက်ညီသဖြင့် လျှောက်ထားလိုသူများသည်
(၁) Application Form ( MAJAရုံးခန်းတွင်လာရောက်ထုတ်ယူရန်/ပေးထားသော Link တွင်လည်း Download ၍ ယူနိုင်ပါသည်)
(၂) လျှောက်လွှာ မိတ္တူ(၁)စုံ
(၃) ပညာအရည်အချင်းအထောက်အထားနှင့် တကွ အမှတ်စာရင်း
(၄) ဓါတ်ပုံ(1)ပုံ ( 3cm x 4cm )
(၅) ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာနှင့် တယ်လီဖုန်းအပြည့်အစုံ
တို့နှင့် တကွ MAJAရုံးခန်းသို့ ၂၀၁၉ခုနှစ်၊ မေလ(၂၄)ရက် ၊ ညနေ (၄း၃၀)ထက်နောက်မကျဘဲလူကိုယ်တိုင် လာရောက် လျောက်ထားရပါမည်။ စာတိုက်မှတစ်ဆင့် ပေးပို့လာသောလျှောက်လွှာများအား လက်ခံစဉ်းစားမည်မဟုတ်ပါ။ အတည်ဖြစ်သောရွေးချယ်မှုကို မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဂျပန်သံရုံးကပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါကMAJAရုံးခန်းသို့လူကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေ၊ တယ်လီဖုန်းအမှတ် ၀၉-၂၆၂၆၀၂၁၂၁ ၊ ၀၉-၄၂၈၆၁၂၁၅၁၊ သို့ဖြစ်စေရုံးချိန်အတွင်း ဆက်သွယ်မေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်ပါသည်။
• MAJA Office (Yangon)
No.2B(4), Snow Garden Housing, Thu Mingalar Road, Hnin Si Gone (A) Ward,Thingangyun Township, Yangon.
• MAJA Office (Mandalay)
1st floor, MABA, Water St, Block 1, Unit 6,Mingalar Mandalay, Chan Mya Thar Si Tsp, Mandalay. Ph 09 255162533
Japan နိုင်ငံ MEXT (Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology) မှ ပေးအပ်သောအောက်ပါ Scholarship Program အတွက် စိတ်ပါဝင်စားသူများ ASJA recommendation နဲ့ လျှောက်ထားလိုပါက research students နှင့် undergraduate students အနေနှင့် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
(ASJA Recommendation ဆိုသည်မှာ ASJA မှ ASCOJA တွင်ပါဝင်သည့်နိုင်ငံများကိုပေးအပ်သည့် Scholarship ဖြစ်ပါသည်။၎င်း Scholarship ကိုရရှိပြီးပါက ASJA မှ ပြုလုပ်သည့် ဆောင်ရွက်ချက်များတွင် ပါဝင်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ASJA အဖွဲ့အစည်းနှင့်ပတ်သက်၍သိရှိလိုပါကဖော်ပြပါ Website တွင်ဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါသည်။ https://asja.gr.jp/en/asja/ )
April 29, 2019 (Monday) မှ May 24, 2019 (Friday) အထိရုံးချိန်အတွင်းလာရောက်လျှောက်ထား နိုင်ပါသည်။
မေလ (၂၄)ရက်နေ့ နောက်ပိုင်းတွင် MAJA ၏ Facebook Page နှင့် website တွင်ကြော်ငြာပေးထားမည်ဖြစ်ပါသည်။
ကျောင်းသူ / ကျောင်းသားတစ်ဦးချင်းစီ Phone ဆက်အကြောင်းကြားပေးမည်မဟုတ်ပါ။
(၁) ဂျပန်နိုင်ငံ၊ တိုကျို အနီးတဝိုက်တွင်ရှိသော University တွင် လျှောက်ထားသူဖြစ်ရပါမည်။
(၃) JASSO မှဖွင့်လှစ်ထားသောတိုကျို မြို့ရှိဂျပန်ဘာသာသင်တန်းကျောင်းတွင် ၆ လ ကြာတက်ရောက်နိုင်သူဖြစ်ရပါမည်။
A student who studies medicine, dentistry or welfare science will not be allowed to engage in clinical training such as medical care and operative surgery until he/she obtainsarelevant license from the Minister of Health, Labor and Welfare under applicable Japanese laws. အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို https://www.mm.emb-japan.go.jp/…/J-Gov%20Scholar%202020.html တွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
Applicants must beagraduate fromaJapanese university or have academic ability equal or superior to that ofaJapanese university graduate. A person will be deemed to have academic ability equal or superior to that ofauniversity graduate, if he/she:
① has completed or will complete 16 years of school education inaforeign country (or 18 years of school education if he/she desires to enroll inadoctoral course in the field of medicine, dentistry or veterinary science, or pharmacy which is based ona6-year course inadepartment or faculty); or
②　is or will be aged 22 or older and has taken an individual entrance qualification examination and has been judged byaJapanese graduate school as being equal or superior in academic ability toauniversity graduate (or 24 or older if he/she desires to enroll inadoctoral course in the field of medicine, dentistry or veterinary science, or pharmacy which is based ona6-year course inadepartment or faculty). Eligible applicants include those who otherwise satisfy or will satisfy qualification requirements for admission toaJapanese graduate school. Asageneral rule,aperson who has completedadoctoral course may not apply unless he/she seeks to obtainadegree.
(5) Health: Applicants must be free from any mental or physical disabilities that would impede the pursuit of study at Japanese graduate school.
• 3. SELECTION
Examination subjects – All applicants must sit examinations in English and Japanese.
(၁) Application Form ( MAJAရုံးခန်းတွင်လာရောက်ထုတ်ယူရန်/ပေးထားသော link တွင်လဲ Download ၍ ယူနိုင်ပါသည်။ )
(၂) လျှောက်လွှာကိုမိတ္တူ ၁စုံ
(၅) MAJA အသင်းသားတစ်ဦး၏ ထောက်ခံစာ (ASJA Recommendation လျှောက်ထားသူများသာ)
(၆) ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာနှင့် တယ်လီဖုန်းအပြည့်အစုံ
တို့နှင့် တကွ MAJA ရုံးခန်းသို့ ၂၀၁၈ခုနှစ်၊ မေလ( ၂၄)ရက် ၊ ညနေ (၄း၃၀)ထက် နောက်မကျဘဲ လူကိုယ်တိုင် လာရောက် လျောက်ထားရပါမည်။ စာတိုက်မှတစ်ဆင့် ပေးပို့လာသောလျှောက်လွှာများအားလက်ခံစဉ်းစားမည်မဟုတ်ပါ။ အတည်ဖြစ်သောရွေးချယ်မှုကို မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဂျပန်သံရုံးက ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။ အသေးစိတ်သိရှိလိုပါကMAJAရုံးခန်းသို့လူကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေ၊ တယ်လီဖုန်းအမှတ် ၀၉-၂၆၂၆၀၂၁၂၁ ၊ ၀၉-၄၂၈၆၁၂၁၅၁၊ သို့ဖြစ်စေ ရုံးချိန်အတွင်းဆက်သွယ်မေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်ပါသည်။
အသေးစိတ်အချက်လက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါ Link တွင် သွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။